#JAAL_MARROO IRRAA DHAAMSA ERGAME – Ayyaantuu
HomeAfaan Oromoo#JAAL_MARROO IRRAA DHAAMSA ERGAME
Dhaamsa oromummaa Jaal Marroo irraa Qeerroo bilisummaa Oromoo guuttumma oromiya keessa jiraanin gahii !!!!!
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana opdo uummaata keenyatti waraana bobbaafte fixaa osoo jirtu ammaammoo WBO n shiftaadha jechuun miseensota ishee walitti qabdee hiriira maqa-balleessi WBO n shiftaadha uummaata fixa ajjeesa jettee uummaata saama jettee shira ammana hinjedhamne duula karaa hundaan nutti bayyifataa jirti.
Kanaaf, isa shiftaan shiftaa namaan jedha ofii ajjeesa WBO maqaa balleessa jirti akka waan uummaati Oromoo argaa hin jirre kanaaf yeroo ammaa kana mootummaan addunyaa argaa jira gochaa mottummaan sanyii milik kana.
Kanaaf, Qeerroon guuttummaa oromiyaa jechaan isiinif dhaamee maaf dagaatan? Ani WBO akkan godhuu nan beeka ati Qeerroon wan gootu situ beekan hirbuu waliif seenne iirrattii wareegama lubbuu kaffallee falmachaa harr’a geenye jirra! kanaaf WBO n tarkaanfii laaleessa akkanni fudhata jiru hunda isa guyyaatifi halkan isiin qaqabsiisutti jirra yeroon neetwoorkiin nuf mijatuu
ilaalame. Ega,Qeerroo Oromoo lubbuun lafa qullaatti osoo ati ciiftuu duutu bor seenan nama hin dhiisu yoo osooma waxxifatanii duwan duutile namarraa bareeddi!
Ciiftee hin duwiin siin jechuu kiyya aabboo
opdon ciiftee siif bula hin jirtu mana keessa ala diina si barbaachitee si ajjeesisaa jirti. kanaaf, atimmoo diina si barbaachisu irraatti tarkaanfii laaleessa fudhachuun yeroon ishee amma akkuma yeroo hiriiraa sanitti walgurmeessuun qabeenya opdo barbaadessuu fi lubbuu ishii iddoo argitanitti wal hirtani barbaaddanii ajjaasuu,mana ishe gubuun diigani daaressun hojjeettota opdo hunda haleeluun tarkaanfii maayii irraatti fudhachuu, haala hundaan waliin marii godhatani yeroo gabaabdu gidduutti opdo fixnee bilisummaa akka gonfannuuf hojjiin itti seennee rawwachuun dirqama oromummaati.
Qeerroo guuttumma oromiya maraaf
Barrii bara bilisummaa ti.
Injiffannoon uummaata Oromoof.”
Dhaamsa Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, Jaal Marroo Dirribaa
Dhaamsa Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, Jaal Marroo Dirribaa (Oromedia, 24 Waxabajjii 2020) Ajajaan WBO Zoonii…
Uummaatni Oromoo haala raafamaafi gaaga’ama, yakka duguuginsa sanyii mootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF biyyatti keessatti…